Ebe nchekwa ndị na -emepụta ihe - IntoKildare
Nri nwere ebe pụrụ iche n'ime obi anyị (na afọ!). Ọtụtụ ndị na -emepụta nri na Ireland dị na County Kildare.
Ịchọrọ ịlele ihe oriri na ihe ọ regionalụ regionalụ mpaghara mpaghara? Kildare nwere ọtụtụ azụmaahịa pụrụ iche na -emepụta ihe kacha mma mpaghara.
Site na chocolatiers ruo ndị na-eme biya, nri etinyere na saịtị na ọtụtụ ihe ọhụrụ emere-Kildare bụ paradaịs ndị hụrụ nri n'anya.
Lily O'Brien si na-ekepụta chọkọletị na-agba mmiri ume na Co. Kildare kemgbe 1992.
Lily & Wild bụ ezigbo onye ọlụlụ gị maka mpaghara na-atọ ụtọ mpaghara na oge a kara aka na ọrụ nlekọta ndị ọkachamara na-enweghị atụ.
Ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nri na kọfị na-enye mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na mkpa nri ndị ọzọ.
Onye isi na-emepụta ihe nri, Mayonezi, Ketchup, Vinegars na mmanụ esi nri. Akara a na-ere ahịa anyị bụ ụtọ nke ịdị mma yana ọrụ nri nwanne anyị nwanyị Brand as Natures Oils & Sauces. Anyị […]